Anbotek Photovoltaic Laboratory (yekutanga yakavanzika photovoltaic yechitatu bato murabhorari munyika).
Anbotek Photovoltaic Bhizinesi Chikamu Kubatsira
• Anbotek ine michina yepamusoro kwazvo mumunda we photovoltaics. Inoshandisa yekunze photovoltaic yekuyedza michina yakadai sekunze Passan, Lexus, ESPECT, nezvimwewo, zvine huchokwadi hwakanyanya. Inokupa huwandu hwakazara hweese maficha eiyo yese indasitiri cheni, kubva mukugadzirwa kwechigadzirwa, kugadzirwa, kutengesa kune technical application. Chivimbiso.
• Inokupa iwe nekukurumidza kuongorora uye setifiketi macircuit uye nemimwe mitengo yakanakira kubatsira vanogadzira PV kuchengetedza nguva yekuyedza uye mutengo.
Iva nemhando mbiri dzemasevhisi, pindura nekukurumidza maawa makumi maviri nemana pazuva, kugadzirisa kunatsa kwebasa uye mhando, uye nekukupa ruzivo rwekushandira.
• Izvo zvinokwanisika kugadzirisa ako ese ekuyedza uye setifiketi matambudziko mune imwechete yekumira, zvichiita kuti kuyedza chitupa kuve nyore.
Kuedza & Certification Services
Iyo ine yakazara nzvero ye photovoltaic module magetsi ekuita rabhoritari, kuvimbika kwezvakatipoteredza rabhoritari, inopisa nzvimbo kutsungirira rabhoritari, yakakurumidza ultraviolet rabhoritari, mechniki mechanics rabhoritari, photovoltaic silica rabhoritari, photovoltaic EVA murabhoritari, junction bhokisi rabhoritari, nezvimwewo nzvimbo. Akapasa iyo National Accreditation Board CNAS Laboratory Qualification uye CMA Certification. Parizvino, ine nyika inozivikanwa yekuyedza kugona kwese indasitiri cheni senge volt zvinoriumba, photovoltaic zvikamu, photovoltaic mbishi uye zvekubatsira zvinhu, uye photovoltaic magetsi emagetsi. "ANBOTEK Photovoltaic Bhizinesi Yuniti" isangano reGerman TUV rekuyedza kuongorora, uye rinoona nezve kuferefetwa kwemamojuru module zvinhu (junction bhokisi, chinongedzo, backplane, EVA, silicone, nezvimwewo). "ANBOTEK Photovoltaic Division" yakavakirwa pane photovoltaic GB / T 9535, IEC 61215, IEC 616146, UL 1703, IEC 61730, IEC 61646 nemimwe mitemo, yevanogadzira mamodheru emafoto, vatengesi, nezvimwe. . Ipa CE, UL, CQC uye mamwe masevhisi emunyika mabasa.
Kuongorora kweMagetsi Chiteshi
"Anbotek Photovoltaic Division" yakavakirwa paIEC62124, IEC 62446, CNCA / CTS0004 uye mamwe maitiro, eiyo photovoltaic system yekuvaka uye vanoshanda, kuitisa yechitatu-bato magetsi chiteshi kuyedza, kuzivikanwa, kugamuchira mabasa. Kusvika pari zvino, pange paine anopfuura zana emabasa ekuwedzera ePV magetsi ekuyedza magetsi uye nekushingairira kuongororwa mabasa muindasitiri, uye pamusoro pezviuru zana zveyuniti yePV module yekuuya yekuongorora masevhisi uye PV module rabhoritari yekuyedza.
Mukugadzirwa kweiyo photovoltaic magetsi chiteshi chirongwa, "Anbotek Photovoltaic Bhizinesi Dhipatimendi" inopa vatengi nePV module yekutarisisa uye PV inverter kugadzirwa kwekutarisa uye mamwe masevhisi kuona kuti izvo nzvimbo dzemagetsi chiteshi uye inverters zviri mukutenga, kugadzira uye pane-saiti kuisirwa . Dhizaini uye yekugamuchira nzira. Kubudikidza nebasa redu rekutarisira, vatengi vanogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvemagetsi, zvinonyatso deredza mutengo wekushandisa we photovoltaic magetsi ekudyara uye neinotevera danho rekutadza, kuitira kuti nguva yekuwana mari yekudyara photovoltaic magetsi zvigare yakatsiga kwenguva yakareba.
Hurumende Photovoltaic Urombo Kupedza Chirongwa
Iyo PV Urombo hwekudzora Chirongwa Chinangwa "chakaparadzira mafotovoltaic magetsi ekugadzira mapurojekiti" akavakwa mumisha ine hurombo, dzimba dzine hurombo, uye varombo vanhu. Yedu "ANBOTEK Photovoltaic Bhizinesi Yuniti" inoshingairira kutora chikamu mukuyedza kwehunyanzvi kwemapurovoltaic hurombo hwekudzora zvirongwa. Ongorora uye wongororo mashandiro uye mhando yemhando yePV mamodule uye zviteshi zvemagetsi zvevatengi, hunyanzvi hwehurongwa, zvikonzero zvekukanganisa mashandiro ePV module nenzvimbo dzemagetsi nedigital degree ravo; zvichibva pane zvekudyara uye zvemari zvinodiwa, ongorora uye ongorora iyo yekugadzira magetsi kugona kwePV magetsi ekudyara; Izvo zvinokanganisa zvinowanikwa mukuwongorora maitiro e photovoltaic magetsi emagetsi anoratidza kuvandudzwa kwekusimudzira kugona kwemagetsi emagetsi emagetsi.
"Anbotek Photovoltaic Bhizinesi Yuniti" isangano reGerman TUV rekuyedza kuongorora mubatanidzwa, uye rinoona nezve kuferefetwa kwemoforovoltaic module zvinhu (junction box, ma connector, backplanes, EVA, silicone, nezvimwewo).
"Anbotek Photovoltaic Division" yakavakirwa pane photovoltaics GB / T 9535, IEC 61215, IEC 616146, UL 1703, IEC 61730, IEC 61646 nemimwe mitemo, yevanogadzira mamodheru emafoto, vatengesi, nezvimwe. . Ipa CE, UL, CQC uye mamwe masevhisi emunyika mabasa.